Iflethi okanye indlu ekwicomplex kwiigadi - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex kwiigadi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguŁukasz
Iflethi isemda wePaki Entle Yesixeko. Malunga nemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto ukusuka Kwidolophu Yakudala. Indawo engummelwane inendawo yayo yokuma kwiPomeranian Metropolitan Rail apho ungathatha isikhephe ukuya kuSeptemba (imizuzu eyi-14) uze uye Kwidolophu Yakudala (malunga nemizuzu eyi-20)
Iflethi inegumbi lokulala elizimeleyo, igumbi lokuhlala elinekhitshi elincinci, igumbi lokuhlambela kunye nebhalkhoni. Kukho ibhedi elala abantu ababini kwigumbi lokulala kunye nebhedi enye kwigumbi lokuhlala. Indawo yonke inento yonke.
Ungafika kwiziko usebenzisa imoto okanye ibhasi. Kukho iivenkile kufuphi neflethi okanye indlu ekwicomplex. Indawo epholileyo noluhlaza ekulula ukuya nokubuya kuyo kwisikhululo seenqwelo-moya. Inethiwekhi ikuvumela ukuba ukhawuleze ufike nakweyiphi na inxalenye yeSixeko seTriple!
Le ngingqi ikumda weTriple Landscape Park apho ungaya khona ngeenyawo okanye uhambe ngebhayisekile.
Ndingathanda ukukumema ukuba uqhagamshelane nam nge-Airbnb